Faraska Albino, xayawaan aad u qurux badan: astaamo, daryeel iyo inbadan! | Fardaha Noti
Monica Sanchez | | Fardaha fardaha
ka fardaha albino waa xoolo haybad leh. Looma garanayo sida kuwa timaha leh midab ama in kabadan, laakiin shaki la’aan waxay kamid yihiin kuwa soo jiita dareenka ugu badan. Laakiin maxay dhab ahaan u eg yihiin?
Haddii aad rabto inaad wax walba ka ogaato iyaga, maqaalkan gaarka ah waxaad baran doontaa inaad aqoonsato, laakiin sidoo kale in la daryeelo iyaga.
1 Asalka iyo taariikhda fardaha albino
2 Waa maxay astaamihiisa?
3 Waa maxay dhaqankaaga iyo shakhsiyaddaadu?
4 Waa sidee caafimaadka fardaha albino?
5 Waa maxay daryeelka ay u baahan yihiin?
5.4 Xannaanada xoolaha
Asalka iyo taariikhda fardaha albino
Halyeeyadayagu waa xayawaan in waxay ka bilaabeen Europe. Halkaas waxaa ka keenay deganeyaal Mareykan dhan qarniyadii 1937aad iyo XNUMXaad, halkaas oo ay ku faafeen dhulka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, looma aqoonsan inay yihiin nooc illaa XNUMX.
Su midabku wuxuu u egyahay inuu cadaan yahay ama ugu badnaan midab ahaan sidaa awgeed magaceeda. Midabkan quruxda badani runtii waa cillad hidde ah oo jiilba jiil u sii gudbinayey. Cilladani waa la'aanta hiddo-wadaha metaboolaya tyrosine-ka soo saara melanin ee lakabyadeeda. Tani waxay sidoo kale sabab u tahay midabkiisa indhaha oo cad, ha ahaado buluug ama casaan, xitaa casaan marka laga hadlayo fardaha. albinos duurjoogta ah.
Taranka ayaa la aqoonsaday labaatan sano ka dib abuuritaankiisa iyada oo loo marayo isku darka Morgan Mare iyo White Stallion qiyaastii dabayaaqadii soddon. Sida iska cad, waa nooc ka mid ah fardaha cad.
Awoodiisa uu u leeyahay qabashada xirfado iyo edbiyo kala duwan ayaa isaga ka dhiga a faras adduunka oo dhan lagu qaddariyo lana aqoonsaday. Waa iskutallaab udhaxeysa dhiig diirran iyo dhiig qabow, oo dhaliya dhiig diirran tanna waxaa ugu wacan dabeecaddiisa iyo kala duwanaantiisa. Waa isku dheelitirka labada dhiig, inta u dhaxeysa laba jinsi. Waa, shaki la'aan, mid ka mid ah quruxda ugu weyn meerahan.
Waa maxay astaamihiisa?
Jaleecada hore, fardaha albino waxay u egyihiin sida ay yihiin, laakiin waxaa jira astaamo taxane ah oo ay tahay inaan ogaano oo ka dhigaya fardaha quruxda iyo xarragada keli ah. Ugu horreyntii, waa inaan ogaanno waxa albinismku yahay. Hagaag, albinism waa cillad hidde ah oo u muuqata natiijo yaraanta soo-saarista tyrosines, kuwaas oo ah amino acids oo ku lug leh abuurista midabka loo yaqaan melanin. Sidaas awgeed, timaha xayawaankani waa cadaan ama labeen jilicsan sidoo kale waxay leeyihiin indho buluug ama casaan ah.
Jidhkiisu waa dhexdhexaad cabbir-dhexaad ah, dhererkiisuna u dhexeeyaa 150 ilaa 160 sintimitir iyo culeys u dhexeeya 400 ilaa 500 kiilo.. Madaxa iyo lugaha ayaa weyn, aragtidiisuna waxay ka tarjumaysaa dabeecad deggan. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in lagu daro in ay leedahay rajo nololeed 25-40 sano.
Waa maxay dhaqankaaga iyo shakhsiyaddaadu?
Fardaha Albino waa dad dabacsan, aamin ah, oo dulqaad badan. Haddiise lagu soo barbaariyay si isku mid ah oo ixtiraam leh, waxay noqon karaan saaxiibo aan caadi ahayn oo ay waqti fiican kula qaataan dibedda. Waxay sidoo kale si wanaagsan ula dhaqmaan carruurta oo aan inta badan dhibaato ku qabin xayawaannada kale, taas oo ah sababta ay ugu noqdaan furfurnaan la yaab leh. Marka maxaad sugeysaa inaad hesho nuqul?
Waa sidee caafimaadka fardaha albino?
Fardaha Albino waxaa ku dhici kara cudurro la mid ah noocyada kale ee sinnaanta, kuwaas oo ah:
Cudurka loo yaqaan 'Equine flu': waa cudur fayras ah oo aad u faafa oo lagu garto qufac, conjunctivitis, qandho iyo dheecaan sanka ka yimaada. Ma aha mid dhimasho inta xayawaanku helayo daaweynta xoolaha.
Rabie: Waa cudur fayras ah oo aad u faafa oo ku faafa candhuufta cudurka qabta ee jirka galeysa. Calaamadaha ugu caansan waa: isbeddellada lama filaanka ah ee dabeecadda, rabshad suurtagal ah, cabsi biyo, lallabbo, matag, xanuun ku haya aagga qaniinyada, degganaansho la'aan iyo, xaaladaha aadka u daran, miyir beelid iyo dhimasho. Nasiib darrose, dawo ma leh, laakiin waxaa jira tallaalo adiga ku difaaci doona.
Cudurka 'Equine encephalomyelitis': Waa cudur faafa oo faafa oo lagu kala qaado qaniinyada kaneecada cudurka qabta. Calaamadaha lagu garto waa qandho sare, taxaddar la'aan, calool xanuun, shuban, dhiig bax, cunto xumo. Aad ayey muhiim u tahay in lala tashado xirfadle isla marka aan ogaanno astaamaha ugu horreeya.
Laakiin sidoo kale, midabka indhahaaga awgood, waxaad yeelan kartaa xaalado kaladuwan oo indhaha ah, maaddaama xubinta tarankaaga aysan taageerin talobixin iftiin xoog leh, iyo wax ka yar muddo dheer. Sidaa darteed, waa muhiim in laga ilaaliyo qorraxda tooska ah, gaar ahaan saacadaha dhexe ee maalinta.
Waa maxay daryeelka ay u baahan yihiin?
La mid ah faraska kale 🙂:
Waa lama huraan sii cunto tayo sare leh si aad u heshid caafimaad wanaagsan, ha ahaato quud, quudin ama hadhuudh. Waxay kuxirantahay da'da iyo baaxada, waa inaad siisaa waxbadan ama kayar. Waxaad macluumaad dheeraad ah ka haysaa mowduucan Halkan.
Waa wax caadi ah in, inta lagu jiro jimicsiga ama socodka, timahaaga ay ku wasakhoobaan boodh, cows, dhoobo ama xitaa saxaro. Sidaas darteed, waa inaad cadayato maalin kasta, oo aad siisaa qubeys toddobaadle ah si aad wasakhda oo dhan uga saarto. Sidoo kale, dhowr jeer usbuucii waa inaad nadiifisaa guriga aad ku nooshahay. Sidan oo kale, waxaad ka fogaan doontaa infekshannada suuragalka ah ee qatar gelin kara caafimaadkooda.
Fardo ku dhex nool duurka ayaa maalin kasta safar dheer gala. Waxay u sameeyaan si ay u helaan daaq wanaagsan iyo / ama aagag ay ka badbaadi karaan, laakiin taasi micnaheedu maahan in fardaha albino ee la nool qoys bini aadam ah aysan ku qasbanaan inay jimicsi sameeyaan. Dhab ahaan, si aad runtii uga farxiso waa inaad la socotaa, ka dhigtaa inay ku boodaan oo boodaan, laakiin laga fogaado saacadaha ugu qoraxda badan.
Inta aad nooshahay waxaa kugu dhici kara cuduro kala duwan. Isku day inaad ka hortagto waxay lagama maarmaan noqon doontaa in la siiyo dhammaan tallaallada ay u baahan yihiin lana tasho xirfadle markasta oo aad ka shakido in caafimaadkaaga uusan caafimaad qabin.
Fardaha Albino waa fardo lagu raaco, adoo raacaya dhamaan talooyinka aan ku siinay, waxaad hubtaa inaad waxbadan ku raaxeysan doonto. Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay iyaga oo aad awoodid, hadda kadib, inaad yeelato daqiiqado badan oo waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Albino
ubax cagaaran dijo
Ma cadda haddii ay tixraaceyso jaakadda ama nooc rasmi ah oo la aqoonsan yahay, ama anshaxyada ay sameyn karto, buug-gacmeedka ayaa sidoo kale xumaan doonin meesha laga soo saaray macluumaadka.
Sidoo kale fardaha aan lahayn midab-kala-sooca indhaha hareerahooda waxay u nugul yihiin kansarka indhaha iyo maqaarka jaanisyada, taasi waa in la yiraahdo qaybta sheegta inaysan u nuglayn cudurada aan ka ahayn tallaalada ka hortagga ah ma noqonayso mid sidaas sax ah, marka lagu daro gubashada daran ee qorraxda oo loo arko faras fara badan oo ay ka maqan yihiin midabka duurka ku jira sidaa darteed milkiilaha waa inuu ku daryeelaa labada kiriimyada maqaarka sida muraayadaha qorraxda gaar ahaan hareeraha indhaha iyo osico oo ah meesha aysan ku laheyn timo taas oo ka dhigeysa shucaac toos ah oo toos ah
Ku jawaab flor lozano
Bucephalus, faraskii Alexander the Great
Waa sidee taranka farduhu?